Weerrarkii hoteelka Afghanistan oo 12 saacadood kaddib la soo gebagabeeyay - BBC News Somali
Weerrarkii hoteelka Afghanistan oo 12 saacadood kaddib la soo gebagabeeyay
Image caption Dadka hoteelka deganaa ayaa isku dayay inay ka soo boodaan dariishada qolalka ay deganayeen si aanay dhibaato u soo gaarin
Ciidammada ammaanka ee waddanka Afghanistan ayaa soo gebagabeeyay weerrar socday 12 saacadood oo rag hubeysan ay ku galeen hoteel nooca lagu raaxaysto ah oo ku yaal gudaha magaalada caasimadda ah ee Kabul, waxaa sidaas sheegay ciidammada ammaanka.
Lix qof oo rayid ah oo ay ku jirto haweeney ajnabi ah ayaa ku dhintay hoteelka Intercontinental ee Kabul, waxaa kaloo goobta ku dhintay saddexda qof ee weerrarka soo qaadday, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidaasi sheegtay.
Ilaa iyo 160 qof ayaa la soo badbaadiyay kaddib markii ciidammada Afghanistan ay xalay oo dhan u dagaalamayeen sidii ay dhismahaasi gacantooda dib ugu soo celin lahaayeen.
Su'aalo ayaa la waydiiyay sida raggaasi sida xooggan u hubaysan ay ugu suuragashay inay galaan gudaha hoteelkan sida weyn loo ilaaliyo.
Image caption Hoteelka Kabul wuxuu kaga yaallaa meel muhiim ah
Hoteelka Intercontinental oo ka mid ah hoteelada ugu caansan dalkaasi ayaa ku yaalla goob taariikhi ah, waxaa uuna aad uga dhex muuqdaa dhismooyinka kale ee ku yaalla caasimadda.
Hoteelkan ayaa ah mid aad loo ilaaliyo, waxaana uu leeyahay bara koontarooll oo dhowr ah. Ilaa iyo haddana ma cadda sida ay raggani dableyda ah ugu suurtagashay inay gudaha u galaan.
Hoteelkan ayaa toddobo sano ka hor waxaa weerar kan lamid ah ku qaaday mintidiinta Taalibaan, kuwaasi muddo shan saacadood ah ay ciidamada ammaanka kula dagaalamayay gudaha hoteelka, ka hor inta aan la dilin, waxaana halkaasi ku dhintay dad ka badan labaatan qof.
Hoteelkan Intercontinental ayaa tobankii sano ee la soo dhaafay ka turjumayay kobaca dhaqalaaha ee dalkaasi. Waxaa albaabada loo furay muddo haatan laga joogo in kabadan nus qarni.